Nguwuphi owona mhlaba ulungele ukukhula kwezityalo? - Umsele
Yintoni Is Titter
Nguwuphi owona mhlaba ulungele ukukhula kwezityalo?
Kukho iintlobo ezintathu eziphambili zomhlaba: isanti, i-silt kunye nodongwe. Owona mhlaba ulungileyo kwizityalo ezininzi ukuqinisekisa ukukhula ngokupheleleyo ngowona mhlaba utyebileyo, uyisanti. Lo mhlaba ngumxube nkqu kuzo zontathu iintlobo eziphambili zomhlaba. Kwiimeko ezininzi, uyakufuna ukulungisa umhlaba ngeumgquba. Kuxhomekeke kubumbano lomhlaba, kungafuneka wongeze i-peat moss kunye nesanti. Nangona kunjalo, zininzi izityalo ezilungiswe kakuhle kwaye zinokukhula kwiintlobo ezithile zomhlaba.
Izityalo ezahlukeneyo zemihlaba eyahlukeneyo
Umhlaba ngokubanzi uchazwa sisixa sesanti, udongwe, kunye nomhlaba owawuqulathiweyo. Oku kwaziwa njengokuguda. Ubume bomhlaba bunxulumene ngqo nomgangatho wezakhamzimba kunye namandla okuhambisa amanzi.
Zeziphi iiBerries ezikhula emithini?
Umhlaba we-loam uqulethe i-balt efanelekileyo, isanti kunye nodongwe kunye ne-humus. Izinto ezenza ukuba olu hlobo lomhlaba lunqweneleke kwaye lulungele ukukhula kwezityalo kubandakanya:
Inqanaba le-pH ephezulu: Inkqubo ye- Eyona pH izityalo ezininzi ziphakathi ko-6.0 no-7.0. Inkqubo ye- Inqanaba le-pH ichaphazela ukukhula kwesityalo. Olu luhlu lweasidi luvumela izondlo zezityalo ezilungileyo ukuba zikhule kunye nezinye izinto zomhlaba, ezinje ngemisundululu.
Inqanaba eliphezulu le-calcium: Izityalo zifuna calcium yokukhula okunempilo. I-calcium inceda ukugcina ulungelelwaniso lweekhemikhali zomhlaba. Ikwaqinisekisa ukuba amanzi afikelela kwiingcambu zezityalo ngokuphucula amandla omhlaba okugcina amanzi. Ikwanegalelo ekudaleni ubumnandi bomhlaba, ngoko ke ioksijini ifikelela ezingcanjini. Ikhalsiyam yehlisa umyinge weetyuwa emhlabeni. Ityuwa eninzi zonakalisa iingcambu kwaye zinciphisa ukukhula kwesityalo kunye nokukwazi ukufunxa izondlo.
Ubume obukrwada: Umhlaba womile, uthambile kodwa ubambekile ekuchukumeni, kwaye uqhekeka ngokulula ukubonelela ngeepropathi zokuhambisa amanzi. Ubume bomhlaba buyawagcina amanzi kunye nezondlo zezityalo. Oku kunceda izityalo ngokufuma okungaguquguqukiyo kunye nokutya. Kuba umhlaba uqhekekile, umoya uhamba ngokulula ukuya ezingcanjini.
Isanti lelona suntswana likhulu emhlabeni kwaye ayinazondlo kakuhle. Ezi zityalo zilandelayo zilungelelaniswe kakuhle nomhlaba oyisanti.
Ingubo yeentyatyambo: Iyayinyamezela imbalela, le intyatyambo ichuma kumhlaba ophantse ungathathi hlangothi we-pH ofumaneka kumhlaba oyisanti.
Inaliti ka-Adam : LeIsityalo seYuccaukhetha umhlaba oyisanti kwaye unyamezele ukutshizwa kwetyuwa. Iingcambu zawo zibola kumhlaba omanzi.
Umhlonyane: Le imifuno engapheliyo iyayinyamezela imbalela kwaye ikhetha umhlaba owomileyo onesanti ongachumanga kakhulu.
Ukhula lwebhabhathane: Tsala amabhabhathane ngale nto Isityalo esithanda ilanga lowo ukhetha umhlaba ompofu, owomileyo.
Umhlaba onomthamo omkhulu unobunzima kwaye awuphefumli kakuhle. Ezi zityalo zilandelayo zilungelelaniswe kakuhle nomhlaba wodongwe.
Inyosi yeoli: Ezinye iintlobo zikhula kumhlaba onesanti, logama ezinye zikhetha imihlaba evunduvundu okanye yodongwe. Jonga phambi kokuthenga ukuba sesiphi na isityalo esikhetha isityalo.
USusan onamehlo amnyama: Le ntyatyambo inokukhula kuluhlu lomhlaba ukusuka Udaka oludongwe . Ifuna umjelo olungileyo womhlaba, ke kuya kufuneka uhlengahlengise ibhedi yakho yeentyatyambo.
Igolide: Le ntyatyambo yasendle iyakwazi ukuzivumelanisa neentlobo ezininzi zomhlaba, kubandakanya udongwe.
Umhlaba onesilivere ungumgubo ngokuzala okuphezulu. Ngelishwa, umhlaba ophakamileyo kunesanti unokuba namanzi ngokulula. Ezi zityalo zilandelayo zilungelelaniswe kakuhle nomhlaba onesilivere.
Umgxobhozo wobisi: Le isityalo ichuma kumhlaba omanzi.
Iris etyheli: Le ngu Isityalo esitshintshayo . Kukulungele ukulungiswa komhlaba ujikeleze iphuli yegadi okanye umlambo.
Iris yaseJapan: Le intyatyambo iyawathanda amanzi, ke yityale ujikeleze indawo yamanzi egadi okanye enye indawo emanzi.
Owona mhlaba ugqibeleleyo weentyatyambo
Owona mhlaba ulungele ukusetyenziswa ziintyatyambo uxhomekeke kuhlobo lwentyatyambo, njengebhalbhu evuthayo nembewu, nalapho ukhulisa khona. Umzekelo, iibhalbhu zentyatyambo ziya kuchuma kumhlaba onesanti oqinileyo.
Umhlaba ovunduvundu ongumhlaba oyisanti ubonelela ngemijelo efanelekileyo yokuthintela ibhalbhu ukuba ingaboli kwaye iingcambu zingakhula ngokulula.
Ubume bokubumba umhlaba bulungile xa kutyalwa iintyatyambo kwisitya, njengebhokisi yefestile okanye imbiza yeentyatyambo.
Kwigadi yeentyatyambo, ungasebenzisa umxube womhlaba womgquba, ipeat, kunye nomhlaba ongaphezulu njengomxube ngokubanzi ngomlinganiselo we-1: 1: 1.
Owona mhlaba ugqibeleleyo wemifuno
Owona mhlaba ulungileyo wegadi yemifuno uxhomekeke kuhlobo lwesitiya onaso. Yeigadi yebhedi ephakanyisiweyoufuna umlinganiselo wama-50/50 womgquba kunye nomhlaba ongaphezulu. Kwigadi yasentsimini udinga umhlaba okhupha amanzi kakuhle.Umhlaba oludongwe uya kufuna ukulungiswaUkuqinisekisa ukuba amanzi aphuma kakuhle. Ungalungisa usebenzisa i-gypsum, vermiculite okanye shale eyandisiweyo.
Umhlaba wezityalo zangaphakathi
Ukuba ukhulisa izityalo, unokucinga ukuba yinto efanelekileyo yokufumana umhlaba kwiyadi yakho ukuze ukhulise izityalo zakho. Oku kuyimpazamo embi kuba umhlaba wegadi uqulethe iibhaktheriya ezinokuba yingozi kwizityalo zakho. Zimbini iindlela onokukhetha kuzo ukuba awufuni ukusebenzisa umhlaba wokubumba wentengiso.
Coca umhlaba wangaphandle
Ukuba ukhetha umhlaba ongaphandle ukuze ukhule izityalo zakho zangaphakathi, kuya kufuneka kuqala uyicofe ukuze uphelise naziphi na izifo, kunye nezinambuzane nokhula. Yisasaze kwiphepha lecookie kwaye ubhake kwi-oven ye-180 degree kwimizuzu engama-30. Nangona le nkqubo iza kukhupha ivumba elibi, iyayinyamekela ibhaktheriya.
Emva kokuba umhlaba ucocekile, kuya kufuneka uyilungise kunye ne-peat moss kunye nesihlabathi. Ezi zizinto eziya kuvumela amanzi ukuba ahambe kakuhle kunye nokuhamba komoya ngelixa ugcina isixa esifanelekileyo sokufuma. Imihlaba yokubhaka yorhwebo iyafana. Babandakanya i-peat moss kunye ne-vermiculite kunye nesichumisi esikhupha kancinci. Ngokudibeneyo ezi zinto zenza umxube womhlaba ogcina izondlo, ugcina ukufuma, kwaye ubonelele umoya kwiingcambu zesityalo.
Yenza uMxube Wakho
Olunye ukhetho kukwenza umhlaba wakho wokubumba. Oku kuyakuvumela ukuba ulawule umgangatho womhlaba. Iresiphi yesixhobo sokutyala esingenasiphelo somhlaba siquka:
I-1/2 cubic yard peat moss
I-1/2 cubic yard perlite
Iiponti ezili-10 zesidlo sethambo
Iiponti ezi-5 zesidlo segazi
Iiponti ezi-5 zelitye lekalika
Hlanganisa zonke izithako ngokufanelekileyo kwaye ugcine kwisitya sokungena ngaphakathi kude kube yimfuneko.
Iprojekthi yezeNzululwazi kuMhlaba oMhle kakhulu wokuKhula kwezityalo
Ungasebenzisa imihlaba eyahlukeneyo kwiprojekthi yakho yesayensi ukuvavanya eyona ilungele ukukhula kwezityalo. Sebenzisa izimbiza ze-peat okanye ezinye izikhongozeli kwaye ugcwalise ngemihlaba eyahlukeneyo, enjengesanti, isilika kunye nodongwe. Yenza indibaniselwano yomhlaba, njengesanti kunye nodongwe, isilika kunye nodongwe kunye nesilika, isanti kunye nodongwe. Unokuthatha isigqibo sokwenza umhlaba owongezelelweyo usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokudityaniswa.
Bhala i-pot nganye ngokucacileyo ukuze wazi ukuba ngowuphi umhlaba kwisitya ngasinye. Yenza hayi kwijenali yakho. Ukuba ukhetha ukusebenzisa ikhowudi yamanani okanye yoonobumba, qiniseka ukuba ugqithisa ulwazi oluchanekileyo kwijenali yakho.
Khetha uhlobo lweMbewu
Ufuna ukusebenzisa imbewu enye kuhlobo ngalunye lomhlaba. Khetha imbewu ngohlobo lwesityalo onqwenela ukusikhulisa. Izityalo zeentyatyambo lukhetho olukhethiweyo njengamayeza.
Qinisekisa ukuba utyala imbewu nganye kubunzulu obufanayo.
Tyala iimbewu ezimbini kwikhonteyina nganye xa kukho imbewu enesiphene kwaye ingahlumi. Ungasisusa isityalo esingaphilanga xa sele kuvele iseti yesibini yamagqabi.
Ukutyala, ukunkcenkceshela kunye nokubeka elangeni ngokwepakethe yembewu.
Bhala uxilongo lwakho
Gcina incwadi yemihla ngemihla kwisityalo ngasinye. Yenza amanqaku kutshintsho oluncinci okanye ukusabela ekukhuleni kwesityalo. Ufuna ukuqaphela yonke iyantlukwano kwizityalo njengoko zikhula.
Indlela yokulinganisa inkqubela yakho
Iprojekthi yakho yesayensi ifuna idatha ukubuyisela uphando lwakho. Kukho izinto ezithile onokulinganisela ukufikelela kuwo owona mhlaba ulungileyo.
Ufuna ukulinganisa ubude kunye nobubanzi bezityalo zakho, yonke imihla.
Xwebhu xa kugqama igqabi ngalinye.
Linganisa indlela esikhula ngayo isityalo ngasinye uze uthelekise nezinye.
Zingaphi iintyatyambo eziveliswa sisityalo ngasinye?
Ngaba inani lembewu liyafana?
Qinisekisa ukuthatha iifoto okanye iividiyo zenkqubela phambili.
Iziphumo zovavanyo lwakho
Kuxhomekeke kwiimfuno zeprojekthi yakho yesayensi, kufuneka uqokelele kwaye uhlalutye idatha yakho yejenali kwaye wenze isigqibo malunga nokuba loluphi uhlobo lomhlaba oluqhube kakuhle, ngokusekwe ekukhuleni, kwimpilo, kwinani lamagqabi, iintyatyambo nembewu.
Umzekelo weSiseko seBasil
Le vidiyo ibhala imihlaba eyahlukeneyo yokukhulisa izityalo ze-basil.
Ukugcinwa Kwamanzi, Umhlaba, kunye noMzekelo wovavanyo lokuKhula kweZityalo
Le vidiyo ibonisa iprojekthi evavanye iipropathi zokugcinwa kwamanzi komhlaba ohlukileyo kunye nendlela ekuchaphazela ngayo ukukhula kwezityalo.
Nokuba igadi yesikhongozeli ngaphakathi okanye igadi engaphandle, isitshixo sokutyala ngempumelelo ziimfuno zomhlaba zezityalo ezithile. Uninzi lomhlaba luyindibaniselwano yesanti, udongwe, kunye nentlenga. Ukuba awulazi uhlobo lomhlaba, ungasebenzisa ixabiso eliphantsiukuvavanywa komhlabaikiti ukufumanisa.
Ulutsha Ukuboniswa Ukwenza Isepha Ukuzila Ukutya Kunye Nedetox Diets Uncedo Donations Iingxaki Zokukhulelwa
Iqela Imiboniso Yeslides
Ndingenza ntoni ngesidanga solawulo
lithetha ntoni ijupiter ekuvumiseni ngeenkwenkwezi
qala incoko nomfana
uyigcina njani indoda ye-aquarius ifakelwe
ezona ndawo uhlala kuzo abantu abadala
usenza kanjani isicelo selaptop yasimahla
indlela yokulahla imikrwelo kwiglasi